नेपाली राजदुताबास जापानलाई नेपाली चेलीको पत्र, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाली राजदुताबास जापानलाई नेपाली चेलीको पत्र
, ३१ चैत्र २०७३
हराएको ८ बर्ष पछिपनि किन केही पत्ता लागेन सविनाको ?
सम्माननीय राजदूत ज्यु,
सर्बप्रथम म जापानवासी नेपाली चेली ईन्दु गौतमको हजुरलाई स-सम्मान नमस्कार ।
हजुर जापानवासी सम्पुर्ण नेपालीको अभिभावक र हाम्रो ख़्याल राख्ने जीम्मेवारी पनि हजुरको । मेरो मनमा उठेका केही प्रश्नहरुको उत्तर पनि हजुरबाट नै पाउछु भन्ने विश्वाशको साथ यो पत्र सम्पुर्ण जापानवासी नेपालीको तर्फ बाट लेख्दैछु।
केही महीना पहीले मैले एउटा समाचार सुनेकी थिए - "जापानमा अध्ययनको लागी आएकी सविना महर्जन धेरै बर्ष देखी लापत्ता" भनेर। तर यहीलेसम्म पनि उनको अवस्था बारे अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दा यो पत्र लेख्न बाध्य भएकी छु । उनको खोजी के कसरी चल्दैछ ? यसको पहल कस्तो चल्दैछ ? खोजी कहाँ सम्म पुग्दैछ ? पत्ता लागीसक्यो या छैन ? लागीसक्यो भने उनी जीवीत छीन या छैनन् ? छीन भने कहा कुन अबस्थामा छीन ? र के कारण ले लापत्ता हुन पुगीन ? यदी जीवीत छैनीन भने स्कुल गैरहेकी सबीनाको कसरी मृत्यु हुन पुग्यो ? आत्महत्या, हत्या अथवा कालगतीले भएको हो ? आत्म हत्या भएको हो भने के कारणले गर्न पुगीन् ? हत्या भएको हो भने यसमा कस्को हात छ र कीन भो अनी यसको कार्रवाई के कसरी हुदैछ ? काल गतीले हुन गएको हो भने कसरी भो ? अथवा खोजीनै भएको छैन भने के कारणले हुन सकेको छैन ?
हामी सम्पुर्ण जापानवासी नेपालीका साथ-साथै आफ्नो देश, परिवार संग बिछोडिएर बिदेशिएका सम्पुर्ण नेपालीजनले यस प्रश्नको उत्तर चाहेका छन । जसले गर्दा आउदो दिनमा अरु सविनाहरु लापत्ता हुन नपरोस, फेरी अरु अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी गुमाउन नपरोस्, राष्ट्रले अरु देशभक्त गुमाउन नपरोस् । आफ्नो सन्तानको सुनौँलो भविस्य देखेर प्रशस्त पैसा खर्च गरेर जापान पठाएकी आफ्नी छोरी एक्कासी लापत्ता हुँदा त्यी अभिभावकको मनमा के बितिरहेको होला ? हामी त्यही ठाँउमा आफ्नो सन्तान अथवा आफ्नो परीवारलाई राखेर हेर्यौँ भने मात्र महसुस गर्न सक्छौँ त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर । यो एउटा परीवारको मात्र पीडा नभएर सम्पुर्ण नेपालीको पीडा हो, पुरा राष्ट्रको पीडा जो आफ्नो नेपाली चेली बिदेशि भुमीमा लापत्ता हुन परेको छ ।जापान जस्तो प्राबधिक सम्पन्न भएको देस भएर पनि हराएको मान्छेको कुनै कुरा पत्ता लगाउन सकीदैन भने अरु के कुरामा आसा राख्न सक्छौँ होला र ? सविनाको छानबिनको लागी हामी नेपाली समुदायले गर्न पर्ने सहयोग मन लगाएर गर्नेछौँ तर तथ्य रुपमा खोजी हुनुपर्यो र सम्पुर्ण विवरण बाहिर निस्कनु पर्यो भन्ने मेरो धारणा छ।
पत्रमा कुनै त्रुटी भएमा क्षमा प्रार्थी छु । हजुरको उत्तर पाउने आशा राख्दै यो पत्र टुङगाउने अनुमति माग्छु।
उही नेपालकी छोरी ईन्दु गौतम लम्साल
आगो भए गगन थापा । संसदमा गुठी विधेयकको चर्काचर्की । Gagan Thapa l Samsad Baithak l
गुठी विधेयकः सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति आगोमा घिउ । Guthi l Gokul Baskota l